House for Sale in Botahtaung - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
🇲🇲🏠 မြို့ထဲတွင် Showroom ဖွင့်ရန် ၊ ရုံးခန်းဖွင့်ရန် ရှာနေသောမိတ်ဆွေများအတွက်...
Ad Number S-9643506
4,500,000,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-9632105
SH5-002779, For Sales, Botahtaung Pagoda Rd, Botahtaung Tsp တြင္ ၂ထပ္အိမ္ပါ ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
Ad Number S-9478711
ဗိုလ်တစ်ထောင် လမ်းကျယ်တွင် လုံးချင်းရောင်းမည်။
Ad Number S-9434850
Ad Number S-9409898
Ad Number S-9399512
Lucky Home Real Estate Close
Ad Number S-9387362
🇲🇲🏠 မြို့ထဲတွင် စီးပွားရေးလုပ်ရန်၊ ရုံခန်းဖွင့်ရန် အတွက် အထူးသင့်တော်သော...
Ad Number S-9377828
Ad Number S-9372905
(50'x60')အကျယ်၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းမပေါ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ရန်နေရာအလွန်ကောင်း...
Ad Number S-9358364